गोल्छाकै पल्ला भारी : कालोबजारी गरेर जनता लुटिरहेका गोल्छा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका समेत दोषी !
ARCHIVE, POWER NEWS » गोल्छाकै पल्ला भारी : कालोबजारी गरेर जनता लुटिरहेका गोल्छा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका समेत दोषी !
काठमाडौँ - शेखर गोल्छा । जो अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भीड्न लागेका छन् । चुनाव जित्नैका लागि रस्कीको खोलो बगाउनेदेखि पैसाको बिटो फ्याकेको भन्ने आरोप लागेका गोल्छा अहिले पनि मोटरसाइकल बेच्ने बहानामा जनतालाई लुटिरहेको तथ्य हामीले यसअघि नै प्रकाशन गरिसकेका छौं । बजाज कम्पनीका मालिक रहेका गोल्छाले बिगत लामो समयदेखि कालोबाजारी ऐन विपरित गैरकानुनी धन्दा चलाएर जनता ठगीरहेका उनी अर्थात शेखर गोल्छा यसअघि पनि अरु गैर कानुनी काममा संलग्न भएको पाइएको छ । उनी केहिबर्ष अघि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा समेत मुछिएको खुलासा भएको छ । उनी र किशोर प्रधानबीच बरिष्ट उपाध्यक्षमा भीडन्त हुन लागेको हो ।
यस्तो थियो नक्कली भ्याट बिल प्रकरण :
केहि बर्षअघि दिवाकर गोल्छाको नेतृत्वमा रहेको गोल्छा समूह अन्र्तगतको हिम इलेक्ट्रोनिक्सकोले छ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट विल फेला परेको थियो । हिम इलेक्ट्रोनिक्सको जिम्मा गोल्छा समूहका उदियमान निर्देशक शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा छ । भ्याट बिल प्रकरणमा परेको अघिल्लो बर्ष गोल्छा समूहकै अर्को र्फम नियोटेरिक पनि राजस्वको अनुसन्धानमा दोषी पाइएको थियो । यही कम्पनीले अगि्रम मिती राखेर भ्याट विल जारी गरेपछि राजस्वले गोल्छा समूहलाई शंकाको घेरामा राखेको थियो । यहींबाट आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट विलको कारोवार भैरहेको हुनसक्ने अनुमान गरेको थियो । तर पछि पुतलिसडकको एउटा र्फममा छापा मार्दा दुई सयभन्दा बढी कम्पनीको नक्कली भ्याट विल फेला पारेपछि भ्याट छलिसम्वन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो अपरेशन सुरु गरिएको थियो ।
बजाज ब्राण्डका मोटरसाइकल बेच्दा पनि यसरि जनता लुटिरहेका छन् गोल्छा